Business Archives - ONE DAILY MEDIA
ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်ရပ်တည် နိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် ၄ ချက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း စတင်ဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်းခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုပါပဲ။ ဝန်ထမ်းအလုပ်နဲ့ ယှဉ်ရင် အစစအရာရာမှာ ခက်ခဲမှု ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပိုများလာပြီး…
လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်ကတည်းက သိခဲ့သင့်သော ဘဝသင်ခန်းစာ အချက်(၂၀) လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကငါကျောင်းပြီးခဲ့တယ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရပ်ဂ်ဘီကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့နေ့တိုင်းနီးပါးလေ့ကျင့်တယ်၊ ပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာလဲ ပထမနှစ်ကိုစတက်လုနီးဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါ့ဘ ၀ ရဲ့ အရာရာ တိုင်းမှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ မကြာသေးမီကပဲ ထိုအပြောင်းအလဲကြီးများနှင့်ဘဝခရီးလမ်းတလျှောက်ကူညီပေးခဲ့သောသင်ခန်းစာအချို့ကိုပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ကငါ့ကိုလမ်းပြပေးမယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် နည်းပြတစ်ယောက် ဖြစ်ပေးခဲ့တာကံကောင်းတာပါပဲ။ အခု…
သူတစ်ပါးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက် မိမိကိုယ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ပါ John Wooden က သူ့အဖေသင်ပေးခဲ့တဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုကို အခုလိုပဲ ပြောပြပါတယ်။ “သူတစ်ပါးထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရန် အဓိက မဟုတ်ပဲ သူတစ်ပါးဆီကအမြဲသင်ယူပြီး မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာကိုသာ ဘယ်တော့မှမရပ်လိုက်ပါနဲ့။ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ အခြားသူလွှမ်းမိုးတာမခံပါနဲ့ ”…
အောင်မြင်သူများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက် (၇)ချက် လူတိုင်းအောင်မြင်ချင်ကြတယ်။ အများစုကချမ်းသာချင်ကြတယ်။ ဒါဆိုငါတို့ဘာလို့အဲဒီကိုရောက်အောင်မသွားတာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အများစု၏ကြီးမားသောအိပ်မက်များဟာ လမ်းလွှဲခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရ စေသော အဟန့်အတားများဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်ပအချက်များမဟုတ်ပဲ အတွင်းစိတ်မှ အတားအဆီးများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းချမ်းသာချင်တယ်၊ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုပါတယ်။ (၁) ရွှေရောင်ပန်းတိုင်များ…
အောင်မြင်မှုရှိသော်လည်း ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုနဲ့ ဘာကြောင့် ထပ်တူမကျနေရသလဲ ?
အောင်မြင်မှုရှိသော်လည်း ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုနဲ့ ဘာကြောင့် ထပ်တူမကျနေရသလဲ ? ၁၉၇၀ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော What Colour Is Your Parachute? ဆိုတဲ့ ဂန္ဓဝင်စာအုပ်ဟာ လူအများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် သူတို့အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ရန်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ် ။ ယနေ့မှာ‌တော့ ထိုမေးခွန်းကို…
သင့်ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်များကို မကြောက်မရွံဖော်ပြရဲရန် နည်းလမ်းကောင်း (၁၀) ချက်
သင့်ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်များကို မကြောက်မရွံဖော်ပြရဲရန် နည်းလမ်းကောင်း (၁၀) ချက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးများ အမြင်များ (သို့) ဆန္ဒများကိုလူသိများအောင်ပြုလုပ်ရန်တွန့်ဆုတ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကျိုးရှိစေသောရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်ကိုသာပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ တခါတရံမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်ရှားရတာ ပိုအဆင်‌ပြေမယ်ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်မှာ‌ တော့ လူတွေကို သင့်‌အပေါ် အသာစီးယူခွင့်ပေးတာက စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကို…
အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီကို အရောက်လှမ်းတဲ့လမ်း အောင်မြင်တဲ့ဘဝကို လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းတော့ မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားဖို့ နည်းလမ်း သင့်ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ နည်းလမ်းတွေရှိရမှာပေ့ါ။ ဒီနည်းလမ်းတွေကို…
Mar 21, 2022 One Daily Media
လုပ်ငန်းခွင်၌ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၆ ချက် ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာ၊ ဒုတိယအရွယ်မှာ ဥစ္စာရှာဆိုတဲ့အတိုင်းမှာ ကျောင်းပြီးဘွဲ့ရတဲ့အခါ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့အလုပ်အကိုင်လေးရဖို့အရေး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ပြီးပြည့်စုံအောင်ရေး၊ ပြီးတဲ့အခါ လူတွေ့စစ်ဆေးအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ အလုပ်ရသွားပြီပေါ့။ အလုပ်စစဝင်ချင်းမှာတော့…
အောင်မြင်ခြင်းအတွက် လျှို့ဝှက်ချက် ကိုယ်အလေးချိန် ဝိတ်လျှော့ချင်တာ ဒါမှမဟုတ် အခြားရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေမယ့် လှည့်ကွက်လေးတစ်ခုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကို…
လူအများ လေးစားရတဲ့သူ ဖြစ်စေဖို့ ဒီအချက်တွေ သတိပြုပါ စာဖတ်သူက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျောင်းသားလည်း ဖြစ်နိုင်သလို အလုပ်ခွင်ထဲ ဝင်နေတဲ့ လူငယ်လူလတ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ကိုယ့်ကို လေးစားမှု ရှိပါသလား။ လေးစားလောက်တယ်ဆိုတဲ့…